Kooxo Hubaysan oo Maanta Wadada u Galay kuna Dhaawacay Gudoomiyahii Degmeda Jalalaqsi - Hablaha Media Network
Kooxo Hubaysan oo Maanta Wadada u Galay kuna Dhaawacay Gudoomiyahii Degmeda Jalalaqsi
HMN:- Waxa ay faah faahino dheeri ah ka soo baxayaan weerar ay geysteen kooxo maanta Gudoomiyaha Degmada Jalalaqsi, Maxamed Cabdulle Fiidoow ku dhaawacay dhul kayn ah oo u dhaxeeya Jowhar iyo Jalalaqsi.
Dhaawaca Gudoomiyaha ayaa yimid kadib markii ay wadada u galeen kooxo hubeysan, sidoo kalena ay Rasaas ku fureen kolonyo Gaadiid ah oo uu la socday Gudoomiyaha iyo ilaalaadiisa gaarka ah.
Gudoomiyaha Degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan, Maxamed Cabdulle Fiidoow ayaa markii la weerarayay ka yimid Magaalada Jowhar, isagoo ku sii jeeday Magaalada Jalalaqsi.
Dhaawaca Gudoomiyaha Degmada Jalalaqsi ayaa waxaa loola cararay Isbitaalka Ciidanka AMISOM ay ku leeyihiin Degmada Jalalaqsi, si dhaawaciisa halkaasi loogu daweeyo.
Weerarka saakay lagu qaaday Gudoomiyaha Degmada Jalalaqsi ayaa waxaa ku dhintay hal Askari, iyadoo Saddex Askari oo kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen.